လော်ရန်စီယမ် - ဝီကီပီးဒီးယား
(Lawrencium မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
လော်ရန်စီယမ် (အင်္ဂလိပ်: Lawrencium) သည် ရေဒီယိုသတ္တိကြွမှု မရှိသော ဒုတိယ transferium element အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အတည်ငြိမ်ဆုံး အခြေအနေဖြစ်သည့် isotope (၂၆၂) တွင် သက်တမ်းဝက်(half life) ၂၁၆ မိနစ်ဖြစ်သည်။ ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအရ ၎င်း၏ atomic number, half-life နှင့် isotopes အရေအတွက် ပမာဏမှာ အနည်းအကျင်းသာ ဖြစ်သည်။ ၎င်းဒြပ်စင်၏ အလေးချိန် (Atomic weight) ပြောင်းလည်းမှုများမှာ isotopes (၂၅၂) မှ (၂၆၂)အထိရှိသည်။၎င်း ဒြပ်စင်ကို ရှာဖွေရေးကိရိယာ Cyclotron (ဒြပ်စင်အသစ်များ ဖော်ထုတ်ရာတွင် အသုံးပြုသော ရှာဖွေရေးကိရိယာ) တည်ထွင်သူ ရူပဗေဒ ပညာရှင် Ernest O. Lawrence အား အစွဲပြု၍ Lawrencium ဟု အမည်ပေးခဲ့သည်။
/ləˈrɛnsiəm/ ( နားဆင်)
နိုဘယ်လီယမ် ← လော်ရန်စီယမ် → ရူသာဖော်ဒီယမ်
အတည်ငြိမ်ဆုံး လော်ရန်စီယမ်၏ အိုင်ဆိုတုပ်များ
syn 2.7 min α 8.04 256Md
syn 6.2 s 78% α 8.44 255Md
syn 27 s α 8.62, 8.52, 8.32, ... 252Md
syn 21.5 s α 8.43, 8.37 251Md
syn 13 s 78% α 8.46, 8.41 250Md
၂ သဘာဝ တွေ့ရှိမှုအခြေအနေ
၃ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှု
၄ ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှု
Transferium element အမျိုးအစားဖြစ်သော ၎င်းဒြပ်စင် အကြောင်းကို အနည်းငယ်သာသိရှိထားပြီး အသုံးပြုရန် နည်းလမ်းတစုံတရာ မရှိသေးပါ။
Transferium element များသည် သဘာဝတွင်တိတိကျကျမတွေ့ရှိရပါ။ ၎င်းတို့တွင် unstable nuclei ပါရှိခြင်းကြောင့် ပြုလုပ်ရန်ခက်ခဲရုံသာမက ရှာဖွေတွေ့ရှိရန် မလွယ်ကူပါ။
လော်ရန်စီယမ်(Lawrencium)သည် သဘာဝအရ မတွေ့ရှိရပါ။ unstable element ဖြစ်၍ ယို့ယွင်းပျက်စီးလွယ်ပြီး အခြား element များအဖြစ် လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲသွားခြင်းကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် မတွေ့ရှိနိုင်ပါ။ ထိုကြောင့် လူသားတို့၏ ကျန်းမာရေးအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုကို လေ့လာရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။
လော်ရန်စီယမ်(Lawrencium) သည် သက်တမ်းဝက်(half-life) အလွန်တိုတောင်းသောကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင် အပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားစရာ မလိုပါ။
↑ Emsley၊ John (2011)။ Nature's Building Blocks: An A-Z Guide to the Elements (New ed.)။ New York, NY: Oxford University Press။ p. 278–9။ ISBN 978-0-19-960563-7။
↑ Fournier, Jean-Marc (1976). "Bonding and the electronic structure of the actinide metals". Journal of Physics and Chemistry of Solids 37 (2): 235–244. doi:10.1016/0022-3697(76)90167-0.
↑ Penneman, R. A. (1976). "'Calculation chemistry' of the superheavy elements; comparison with elements of the 7th period". Proceedings of the Moscow Symposium on the Chemistry of Transuranium Elements: 257–263. doi:10.1016/B978-0-08-020638-7.50053-1.
↑ Lawrencium Ionization Energy Measured | April 13, 2015 Issue - Vol. 93 Issue 15 | Chemical & Engineering News
↑ "First-principles calculation of the structural stability of 6d transition metals" (2011). Physical Review B 84 (11). doi:10.1103/PhysRevB.84.113104. Bibcode: 2011PhRvB..84k3104O.
ဤ ဓာတုဗေဒနှင့်ဆက်နွယ်သော ဆောင်းပါးမှာ ဆောင်းပါးတို တစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ဖြည့်စွက်ရေးသားခြင်းဖြင့် မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားကို ကူညီပါ။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=လော်ရန်စီယမ်&oldid=705112" မှ ရယူရန်
၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၃:၀၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၃:၀၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။